1. Neiko kutarisira mhuri kuchigona kuva kwakaoma kwazvo nhasi?
“MAMIRIRO ezvinhu enyika ino ari kuchinja.” (1 VaKorinte 7:31, NW) Mashoko iwayo akanyorwa makore anopfuura 1 900 apfuura, uye ndeechokwadi sei nhasi! Zvinhu zviri kuchinja, zvikurukuru pamusoro poupenyu hwemhuri. Chairangarirwa sechemuzvarirwo kana kuti chenguva dzose makore 40 kana kuti 50 apfuura chinowanzova chisingagamuchiriki nhasi. Nemhaka yaikoku, kutarisira mhuri nenzira inobudirira kunogona kupa denho huru. Kunyange zvazvo zvakadaro, kana zano rapaMagwaro richiteererwa, unogona kukurira denho idzodzo.
RARAMAI MAERERANO NEMARI YAMUNOWANA
2. Mamiriroi ezvinhu emari anoparira dzvinyiriro mumhuri?
2 Nhasi vanhu vakawanda havasati vachagutswa noupenyu hwakapfava, hune chokuita nemhuri. Sezvo nyika yezvokutengeserana ichigadzira zvinhu zvakawanda zvikuru uye ichishandisa unyanzvi hwayo hwokushambadzira kuedza kukwezva vanhu, mamiriyoni avanababa navanaamai anopedzera maawa akawanda kubasa kuti agogona kutenga izvi zvinhu. Mamwe mamiriyoni anotarisana nerwisano yezuva nezuva yokungowana chete zvokudya. Anofanira kupedzera nguva yakawanda zvikuru kubasa kupfuura zvazvaisiva, zvichida kuva namabasa maviri, kungoda kubhadhara zvinodikanwa. Bva vamwe vangafara kuwana basa, sezvo urovha chiri chinetso chakapararira. Hungu, upenyu hahusi nyore nguva dzose nokuda kwemhuri yazvino uno, asi nheyo dzeBhaibheri dzinogona kubetsera mhuri kuita zvadzinogona mumamiriro ezvinhu adzo.
3. Inheyoi iyo muapostora Pauro akatsanangura, uye kuishandisa kunogona sei kubetsera munhu kuva anobudirira mukutarisira mhuri?
3 Muapostora Pauro akatambura dzvinyiriro dzezvemari. Mukubata nadzo, iye akadzidza chidzidzo chinokosha, icho iye anotsanangura mutsamba yake kushamwari yake Timotio. Pauro akanyora, kuti: “Hatina kuuya nechinhu panyika, hatigoniwo kubuda tine chinhu; asi kana tine zvokudya nezvokufuka, tichatenda nazvo.” (1 Timotio 6:7, 8) Chokwadi, mhuri inoda zvinopfuura zvokudya nezvokupfeka chete. Inodawo pokugara. Vana vanoda dzidzo. Uye kune zvikwereti zvokurapwa nedzimwe ndyiko. Zvisinei, nheyo yamashoko aPauro inoshanda. Kana tichigutswa nokugutsa zvinodikanwa zvedu panzvimbo pokuedza kugutsa zvatinoda, upenyu huchava huri nyore zvikuru.
4, 5. Kufanofunga nokuronga zvinogona sei kubetsera mukutarisirwa kwemhuri?
4 Imwe nheyo inobetsera inowanwa mumumwe wemienzaniso yaJesu. Iye akati: “Ndiani kwamuri, kana achida kuvaka svingo, usingatangi kugara pasi, akaverenga kukosha kwayo, kuona kana ane mari yokuipedzisa nayo?” (Ruka 14:28) Jesu pano ari kutaura nezvokufanofunga, kuronga pachine nguva mberi. Takaona muganhuro rakapfuura kuti ikoku kunobetsera sei apo vaduku vaviri vanenge vachifunga nezvokuroorana. Uye pashure peroorano, kunobetserawo mukutarisira mhuri. Kufanofunga munzvimbo ino kunobatanidza kuva nemari inorongwa kushandiswa, kuronga pachine nguva mberi kushandisa nokuchenjera zvikurusa mari inowanika. Neiyi nzira mhuri inogona kudzora ndyiko, kutsaura mari yokushandisa pazvinokosha zuva rimwe nerimwe kana kuti vhiki imwe neimwe, uye kwete kurarama nemari inopfuura yainowana.
5 Mudzimwe nyika, kuronga mari inoshandiswa kwakadaro kungareva kufanira kudzivisa sundo yokukwereta nemhindu huru nokuda kwezvinotengwa zvisiri madikanwa. Mudzimwe, kungareva kudzora zvikuru kushandiswa kwamakadhi okutenga nechikwereti. (Zvirevo 22:7) Kungarevawo kudzivisa kutenga kusina kurongwa—kutenga chimwe chinhu kamwe kamwe pasina kuyera zvinodikanwa nemigumisiro. Uyezve, mari inorongwa kushandiswa ichaita kuti kuve pachena kuti kupambadza mari nenzira youdyire mukubhejera, kusvuta fodya, uye kunyanyonwisa kunokuvadza mamiriro emari yemhuri, pamwe chete nokurwisana nenheyo dzeBhaibheri.—Zvirevo 23:20, 21, 29-35; VaRoma 6:19; VaEfeso 5:3-5.
6. Izvokwadii dzapaMagwaro dzinobetsera avo vanofanira kugara vari muurombo?
6 Zvakadiniko, kunyange zvazvo zvakadaro, nezvaavo vanomanikidzwa kurarama vari varombo? Kutanga, vanogona kunyaradzwa nokuziva kuti ichi chinetso chenyika yose ndechechinguvana bedzi. Munyika itsva iri kusvika nokukurumidza, Jehovha achabvisa urombo pamwe chete nezvimwe zvakaipa zvose zvinoparira rusuruvaro kurudzi rwomunhu. (Pisarema 72:1, 12-16) Munguva ino, vaKristu vechokwadi, kunyange kana vari varombo zvikuru, havanzwi vachipererwa nezano rose, nokuti vanotenda chipikirwa chaJehovha, chinoti: “Handingatongokuregeri, handingatongokusiyi.” Nokudaro, mutendi anogona kuti nenzira ine chivimbo: “Ishe ndiye mubatsiri wangu; handingatyi.” (VaHebheru 13:5, 6) Mumazuva ano akaoma, Jehovha akatsigira vanamati vake munzira dzakawanda apo vanorarama maererano nenheyo dzake ndokuisa Umambo hwake pakutanga muupenyu hwavo. (Mateo 6:33) Nhamba huru dzavo dzinogona kupupurira, dzichiti, mumashoko omuapostora Pauro: “Pachinhu chipi nechipi napazvinhu zvose ndakadzidziswa kuti ndizive kuguta nokunzwa nzara, kuva nezvizhinji nokushayiwa. Ndingaita zvose naiye unondipa simba.”—VaFiripi 4:12, 13.
7. Mashokoi aJesu, kana akashandiswa, achabetsera mukutarisira zvomumba kunobudirira?
7 Nechokumugumo kwoushumiri hwake hwapasi, Jesu akati: “Ida wokwako, sezvaunozvida iwe.” (Mateo 22:39) Kushandisa iri zano mumhuri kunobetsera zvikuru kwazvo mukutarisira zvomumba. Kunze kwezvo, ndivanaani vari vavakidzani vedu vapedyosa, vanodiwa zvikurusa kana vasiri avo tinogara navo mumhuri—varume navadzimai, vabereki navana? Mitezo yemhuri inogona sei kuratidza kudana?
8. Rudo runogona sei kuratidzirwa mukati memhuri?
8 Imwe nzira ndeyokuti mutezo mumwe nomumwe wemhuri uite mugove wawo une mufungo wamabasa omumba. Nokudaro, vana vanofanira kudzidziswa kurongedza zvinhu pashure pokuzvishandisa, izvozvi zvingava zviri zvipfeko kana kuti zvokutambisa. Kungatora nguva nenhamburiko kuwaridza mubhedha mangwanani mamwe namamwe, asi ibetsero huru mukutarisirwa kwezvomumba. Chokwadika, uyanga hwakati, hahudzivisiki, asi vose vanogona kushandira pamwe chete kuchengeta musha wakatsvinda zvine mufungo, pamwe chete nokuchenesa pashure pezvokudya. Usimbe, kuzvifadza uye mudzimu wamafi, wokuzengurira, zvine mugumisiro wakaipa pamunhu ari wose. (Zvirevo 26:14-16) Pane rumwe rutivi, mudzimu unofadza, wokudisa unokurudzira upenyu hwemhuri inofara. “Mwari unoda munhu unopa nomufaro.”—2 VaKorinte 9:7.
9, 10. (a) Mutoroi unowanzova pamukadzi wemba, uye iwoyu unogona sei kurerutswa? (b) Murangariroi wakadzikama webasa romumba unokarakadzwa?
9 Kurangarira norudo zvichabetsera kudzivisa mamiriro ezvinhu ari chinetso chakakomba mumisha yakati. Vanaamai nenzira yegamuchidzanwa vave vari tsigiro huru youpenyu hwapamusha. Vakatarisira vana, vakachenesa musha, vakageza zvipfeko zvemhuri, uye vakatenga ndokubika zvokudya. Mudzimwe nyika, vakadzi vakawanzoshandawo muminda, kutengesa zvirimwa mumusika, kana kuti kubetsera mudzimwe nzira kumari inorongwa kushandiswa yemhuri. Kunyange uko ikoku kwakanga kusiri tsika kare, kushayiwa kwakamanikidza mamiriyoni avakadzi vakaroorwa kutsvaka basa kunze kwomusha. Mudzimai naamai anoshanda zvakaoma muidzi nzvimbo dzakasiyana-siyana anofanirwa nerumbidzo. Kufanana no“mukadzi unoita zvakanaka” anorondedzerwa muBhaibheri, mazuva ake akazadzwa namabasa. “Asingadyi zvokudya zvousimbe.” (Zvirevo 31:10, 27) Ikoku hakurevi, kunyange zvazvo zvakadaro, kuti mukadzi ndiye bedzi anogona kushanda mumusha. Pashure pokunge murume nomudzimai vose vari vaviri vashanda zuva rose kunze kwomusha, mudzimai oga anofanira kutakura mutoro webasa muimba apo murume navamwe vasara vemhuri vanozorora here? Zvirokwazvo kwete. (Enzanisa na2 VaKorinte 8:13, 14.) Naizvozvo, somuenzaniso, kana amai vachizogadzirira zvokudya, vangaonga kana mimwe mitezo yemhuri ikabetsera nokugadzirira nokuwaridza patafura, kuita kumwe kwokutenga, kana kuti kuchenesa zvishomanene pamba. Hungu, vose vanogona kugovera mutoro wacho.—Enzanisa naVaGaratia 6:2.
10 Vamwe vangati: “Kwandinogara harisi basa romurume kuita zvinhu zvakadaro.” Ikoko kungava kwechokwadi, asi hakungavi kwakanaka here kupa iyi nhau rangariro yakati? Apo Jehovha Mwari akatanga mhuri, haana kurayira kuti basa rakati raizoitwa bedzi navakadzi. Pane imwe nhambo, apo murume akatendeka Abrahama akashanyirwa nenhume chaidzo dzakabva kuna Jehovha, iye pachake akagoverana mukugadzirirwa nokupiwa kwezvokudya zvavashanyi. (Genesi 18:1-8) Bhaibheri rinopa zano, kuti: “Varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo.” (VaEfeso 5:28) Kana, pamugumo wezuva, murume aneta uye achida kuzorora, hakungabviri here kuti mudzimai anonzwa nenzira imwe cheteyo, zvichida zvikuru saizvozvo? (1 Petro 3:7) Ipapo, hakungavi kwakafanira here kuda kuti murume abetsere pamusha?—VaFiripi 2:3, 4.
11. Jesu akagadza muenzaniso wakaisvonaka nokuda kwomutezo mumwe nomumwe wemhuri munzirai?
11 Jesu ndiye muenzaniso wakanakisisa wouyo akafadza Mwari ndokuunza mufarwa kuvasonganiri vake. Kunyange zvazvo asina kutongoroora, Jesu muenzaniso wakanaka nokuda kwavarume, pamwe chete nokuda kwavadzimai navana. Iye akati nezvake amene: “Zvakaita soMwanakomana womunhu usina kuuya kuzoshumirwa, asi kushumira,” ndiko kuti, kubatira vamwe. (Mateo 20:28) Dzinofara sei mhuri dziya umo mitezo inosakurira chimiro chendangariro chakadaro!
RUCHENO—NEI RUCHIKOSHA KWAZVO?
12. Jehovha anodei kuavo vanomubatira?
12 Imwe nheyo yeBhaibheri inogona kubetsera mukutarisirwa kwemhuri inowanwa pana 2 VaKorinte 7:1. Ipapo tinorava, kuti: “Ngatizvinatse pamatsvina ose enyama noomweya.” Avo vanoteerera aya mashoko akafuridzirwa vanogamuchirika kuna Jehovha, uyo anoda “kunamata, kwakarurama, kusina mhosva.” (Jakobho 1:27) Uye mhuri yavo inogamuchira betsero dzinobatanidzwa.
13. Nei rucheno ruchikosha mukutarisira mhuri?
13 Somuenzaniso, Bhaibheri rinotivimbisa kuti zuva richauya apo hosha nechirwere zvisati zvichizovapozve. Panguva iyoyo, “hakuna ugeremo, uchati: Ndinorwara.” (Isaya 33:24; Zvakazarurwa 21:4, 5) Kusvikira panguva iyoyo, zvisinei, mhuri iri yose inofanira kutarisira chirwere panguva nenguva. Kunyange Pauro naTimotio vakarwara. (VaGaratia 4:13; 1 Timotio 5:23) Zvisinei, nyanzvi dzokurapa dzinotaura kuti zvirwere zvakawanda zvinodzivisika. Mhuri dzakachenjera dzinonzvenga zvirwere zvinodzivisika kana dzikadzivisa kusachena kwenyama nokwomudzimu. Ngatirangarirei kuti sei.—Enzanisa naZvirevo 22:3.
14. Rucheno rwetsika runogona kudzivirira mhuri muchirwere munzirai?
14 Rucheno rwomudzimu runobatanidza rucheno rwetsika. Sezvinosanozivikanwa, Bhaibheri rinotsigira mipimo yakakwirira yetsika uye rinoshurikidza rudzi rupi norupi rwevatano yokunze kweroorano. “Mhombwe, . . . vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume, . . . havangagari nhaka youshe hwaMwari.” (1 VaKorinte 6:9, 10) Kuchengeta iyi mipimo yorumano kunokosha zvikuru nokuda kwavaKristu vanogara munyika yanhasi yakaipa. Kuita saizvozvo kunofadza Mwari uyewo kunobetsera kudzivirira mhuri pahosha dzinopfuudzwa muvatano dzakadai seAIDS, njovhera, chinzonono, uye chlamydia.—Zvirevo 7:10-23.
15. Ipa muenzaniso wokushayiwa rucheno mumuviri uko kunogona kuparira chirwere chisiri madikanwa.
15 ‘Kuzvichenesa umene pachinosvibisa chiri chose chenyama’ kunobetsera kudzivirira mhuri pazvimwe zvirwere. Hosha dzakawanda dzinoparirwa nokushayiwa rucheno rwomuviri. Muenzaniso mukurusa itsika yokusvuta. Kusvuta hakusati bedzi kuchisvibisa mapapu, zvipfeko, uye mhepo imene asi kunoitawo kuti vanhu varware. Mamiriyoni avanhu anofa gore rimwe nerimwe nemhaka yokuti vaisvuta fodya. Funga nezvako; gore rimwe nerimwe mamiriyoni avanhu angadai asina kurwara ndokufa nokukurumidza kudai akanga adzivisa ‘chinosvibisa chenyama ichocho’!
16, 17. (a) Mutemoi wakapiwa naJehovha wakadzivirira vaIsraeri muzvirwere zvakati? (b) Nheyo inotsigira Dheuteronomio 23:12, 13 inogona sei kushandiswa mumhuri dzose?
16 Rangarira mumwe muenzaniso. Makore anenge 3 500 apfuura, Mwari akapa rudzi rwaIsraeri Mutemo wake kuti aronge kunamata kwavo uye, kusvikira kumwero wakati, upenyu hwavo hwezuva riri rose. Mutemo iwoyo wakabetsera kudzivirira rudzi rwacho pahosha kupfurikidza nokutanga mitemo inokosha youtsanana. Mutemo mumwe wakadaro waiva nechokuita nokuraswa kwetsvina yavanhu, iyo yaifanira kufusirwa zvakafanira kure nomusasa kuitira kuti nharaunda umo vanhu vaigara haisati yaizoshatiswa. (Dheuteronomio 23:12, 13) Mutemo wakare iwoyo uchiri zano rakanaka. Kunyange nhasi vanhu vanorwara ndokufa nemhaka yokuti havasati vachiutevera. *
17 Mutsinhirano nenheyo inotsigira mutemo iwoyo wechiIsraeri, kamuri rokushambira remhuri nenzvimbo yechimbudzi—mungave mukati kana kuti kunze kwemba—zvinofanira kuchengetwa zvakachena uye zvichiiswa mushonga unouraya utachiona. Kana nzvimbo yechimbudzi isingachengetwi yakachena uye yakafukidzwa, nhunzi dzichaunganamo ndokuparadzira utachiona kudzimwe nzvimbo dzomusha—uye pazvokudya zvatinodya! Uyezve, vana navakura vanofanira kugeza maoko avo pashure pokushanyira iyi nzvimbo. Vakasadaro, vanodzokera noutachiona paganda ravo. Maererano nomumwe chiremba weFrance, kugeza maoko “kuchiri imwe yevimbiso dzakanakisisa dzokudzivirirwa kwehosha dzakati dzokugaya, dzokufema, kana kuti dzeganda.”
18, 19. Zvikarakadzoi zvinopiwa zvokuchengeta imba yakachena kunyange munharaunda ine urombo?
18 Chokwadi, rucheno idenho munharaunda ine urombo. Munhu akarovedzana nenharaunda dzakadaro akatsanangura, kuti: “Mamirire okunze anopisa zvikuru anoita kuti basa rokuchenesa rive rakaoma zvakapetwa ruviri. Madutu eguruva anofukidza pakatsemuka pari pose pemba neguruva dzvuku rakatsetseka. . . . Vagari vanowanda nokukurumidza mumaguta, pamwe chete nomunzvimbo dzomumaruwa, vanoparirawo ngozi dzoutano. Pombi dzinotakura tsvina dzisina kuvharwa, mirwi yamarara isina kutorwa, zvimbudzi zvomunzanga zvine tsvina, makonzo anotakura hosha, mapete, uye nhunzi zvazova zvinoonwa zvinozivikanwa navose.”
19 Kuchengeta rucheno muaya mamirire ezvinhu kwakaoma. Zvisinei, kwakafanirwa nenhamburiko. Sipo nemvura nebasa romuraudzo shomanene zvakachipa zvikuru kupfuura zvikwereti zvemishonga nezvechipatara. Kana uchigara mumhoteredzo yakadaro, kusvikira patambanuko inobvira, chengeta imba yako umene neruvanze zvakachena uye zvisina tsvina yezvipfuyo. Kana nzira inoenda kumusha kwako ichiva namadhaka mukati menhambo dzinonaya mvura, ungagona kuisa tsanza kana kuti mabwe kubetsera kuchengeta madhaka ari kunze kwemba here? Kana shangu kana kuti hwashu zvichishandiswa, izvozvi zvinogona kubviswa mupfeki asati apinda mumba here? Uyewo, munofanira kuchengeta mvura yenyu isina kusvibiswa. Kunofungidzirwa kuti nzufu dzinenge mamiriyoni maviri pagore dzinoparirwa nehosha dzine chokuita nemvura ine tsvina noutsanana hwakashata.
20. Kana imba ichizova yakachena, ndivanaani vanofanira kugoverana mutoro wacho?
20 Musha wakachena unotsamira pamunhu ari wose—amai, baba, vana, uye vashanyi. Vamwe amai vane vana vasere muKenya vakati: “Vose vakadzidza kuita rutivi rwavo.” Musha wakachena, wakatsvinda unorumbidza mhuri yacho yose. Chimwe chirevo cheSpain chinoti: “Urombo hahupariri kusachena.” Kana munhu achigara mumusha wakaisvonaka, mufurati, mumusha une mwero, kana kuti muchitangwena, rucheno runokosha kuti mhuri ive yakasimba zvikuru.
KURUDZIRO INOTIITA KUTI TIBUDIRIRE
21. Mutsinhirano naZvirevo 31:28, chii chichabetsera kuunza mufarwa kumhuri?
21 Pakukurukura mudzimai anoita zvakanaka, bhuku raZvirevo rinoti: “Vana vake vanomuka, vachimuti: Vakaropafadzwa; nomurume wakewo unomurumbidza.” (Zvirevo 31:28) Ndirini pawakapedzisira kurumbidza mutezo wemhuri yenyu? Chaizvoizvo, takafanana nemiti muchirimo iyo yakagadzirira kutunga apo inogamuchira kudziya nomwando. Kana tiri isu, tinoda rumbidzo youshamwari. Inobetsera kuti mudzimai azive kuti murume wake anoonga basa rake rakaoma netarisiro yorudo uye kuti haasati achimurerutsa. (Zvirevo 15:23; 25:11) Uye kunofadza apo mudzimai anorumbidza murume wake nokuda kwebasa rake kunze nomukati momusha. Vanawo vanoita zvakanaka apo vabereki vavo vanovarumbidza nokuda kwenhamburiko dzavo pamusha, kuchikoro, kana kuti muungano yechiKristu. Uye kutenda kuduku kunoita zvakawanda sei! Kunodei kuti: “Mazvita”? Zvishomanene zvikuru, bva betsero muchivimbo chemhuri inogona kuva huru.
22. Chii chinodikanwa kuti mhuri ive “inosimbiswa,” uye ichochi chinogona sei kuwanwa?
22 Nokuda kwezvikonzero zvakawanda, kutarisira mhuri hakusi nyore. Zvisinei, kunogona kuitwa nebudiriro. Chimwe chirevo cheBhaibheri chinoti: “Imba inovakwa nouchenjeri; inosimbiswa nenjere.” (Zvirevo 24:3) Uchenjeri nenzwisiso zvinogona kuwanwa kana vose vari mumhuri vachivavarira kudzidza kuda kwaMwari nokukushandisa muupenyu hwavo. Mhuri inofara zvirokwazvo yakafanirwa nenhamburiko yacho!
^ ndima 16 Mubhuku remirayiridzo rinopa zano renzira yokudzivisa nayo manyoka—hosha inozivikanwa navose inotungamirira kunzufu dzakawanda dzavacheche—World Health Organization inoti: “Kana pasina chimbudzi: itira tsvina kure nemba, uye nenzvimbo umo vana vanotamba, uye anenge mamita 10 kubva panocherwa mvura; fukidza tsvina yacho nevhu.”
IDZI NHEYO DZEBHAIBHERI DZINOGONA SEI KUBETSERA . . . MHURI KUTARISIRA ZVOMUMBA ZVAVO?
Kuchenjera kugutswa nezvinodikanwa zvoupenyu. —1 Timotio 6:7, 8.
Jehovha haasati achizosiya avo vanomubatira.—VaHebheru 13:5, 6.
Kuda vamwe ivara rechiKristu rakatanhamara.—Mateo 22:39.
VaKristu vanoramba vakachena mumuviri nomumudzimu. —2 VaKorinte 7:1.
MVURA YAKACHENA, UTANO HWAKANAKA
World Health Organization inopa zvikarakadzo zvinoshanda nokuda kwavanhu vari munyika umo mvura yakachena ingave yakaoma kuwana uye utsanana hungava hwechinyakare.
“Cherai ndokuchengeta mvura yokunwa mumudziyo wakachena. Chengetai mudziyo wakafukidzwa uye musabvumira vana kana kuti mhuka kunwira mauri. . . . Cherai mvura bedzi nechichereso chine mubato murefu icho chinochengeterwa zvikurukuru chinangwa ichocho. Bvisai mvura ndokugeza mudziyo wacho zuva riri rose.
“Virisai mvura ichashandiswa kugadzira zvokudya kana kuti zvokunwa zvavana vaduku. . . . Mvura inofanira kuviriswa kwamasekondi mashomanene bedzi.”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Unogona Sei Kutarisira Mhuri?
fy chits. 4 pp. 39-50